नेकपाको मृत्यु हुँदा मलामी जाने कोही भएनन् : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले नेकपाको मृत्यु हुँदा पनि मलामी जाने मानिस नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधि नै मान्न नसकिने पनि बताए । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेशको शुक्रवार दोश्रो अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेता थापाले सो कुरा बताएका हुन् । हिजो ओली र प्रचण्डले छातीमा मुड्की बजार्दै अब ५० वर्ष चलाइन्छ भने पनि कम्युनिष्ट पार्टी मर्दा कोही नबोल्ने गरेको र मलामी जाने मानिस समेत नभएको नेता थापाले बताए । मरिसकेका पार्टीका...
कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहंकारी र अयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पनि लोभी भएको उनले बताए ।...
केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन : गगन थापा
कांग्रेस नेता गगन थापाले केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने बताएका छन् । ‘ओली सरकारले गर्ने निर्वाचनमा जान सकिँदैन । निर्वाचनमा धाँधली गर्न खोज्यो भने निर्वाचन आयोगले रोक्ने हिम्मत राख्छ...
ओलीको बदनियत रोक्न कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ : गगन थापा
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बद्नियत रोक्न पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक संघ बाग्लुङको २०औँ र २१औँ संयुक्त प्रतिनिधिसभा कार्यक्रमको बिहीबार उद्घाटन गर्दै...
गगन थापाको प्रश्न – सभामुख कुन पार्टीको हो ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सभामुखको पार्टी कुन हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले अदालतको निर्णयले थप संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको बताएका हुन् । 'अदालतको फैसलापछि सभामुखलाई कुन पार्टीको मान्ने,' थापाले प्रश्न गरे, 'अदालतको फैसलाले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । यी जटिलताहरू फर्की फर्की अदालतकै ढोकामा जाने हो ।' उनले हिजोसम्म नेकपाको विवाद टुंगो नलागेसम्म कांग्रेस चुप लाग्ने नीति रहेको तर अदालतको फैसलापछि कांग्रेसले छिटै नयाँ धारणा स...
गगन थापाको कटाक्ष– 'प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न होइन, हास्य कलाकारलाई सुन्न जनता आएका हुन्'
चुनावमा गए रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री बनिन्छ होला नि! : गगन थापा
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले चुनाव नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो विषय नभएको बताएका छन्। थापाले संविधान जोगाउनु कांग्रेसका लागि अहिलेको मुख्य विषय भएको प्रस्ट पार्दै यस्तो बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ सिन्धुपाल्चोकले मेलम्चीमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले विधि पद्धति बचाउन लाग्नुपर्ने उनले बताए। 'कांग्रेसका…
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले अदालत परीक्षाको घडीमा रहेको बताएका छन् । अदालत कतैबाट प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस बुटवलले बिहीबार गरेको विरोध सभामा नेता थापाले...
बन्द कोठाको खासखुसले अदालत प्रभावित नहोस् : गगन थापा
८ माघ, बुटवल । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अदालत र न्यायाधीशहरुलाई धर्म नछाड्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दापछि सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालत परीक्षामा रहेको भन्दै नेता थापाले संविधानमा टेकेर निर्णय गर्न न्यायाधीशहरुसंग आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले बुटवलमा गरेको सभामा बोल्दै थापाले बन्द कोठाभित्रको खासखुस र बाहिरको कुराले […]